Puntland oo joojisay howlihii shaqo ee xafiisyada iyo howl-wadeenada Tv-ga Universal ee gudaha – Radio Daljir
Seteembar 21, 2013 2:58 b 0
Garoowe, September 21, 2013 – Dowladda Puntland ayaa maanta joojisay ?dhamaan howlihii shaqo iyo xafiisyadii TV-ga Universal ee gudaha deeganada Puntland, kadib eedeymo loo jeediyey sida lagu cadeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaarada warfaafinta ee Puntland ayaa lagu sheegay in ay wasaarada soo gaareen fariimo kala duwan oo ka yimi dadweynaha iyo waxgaradka reer Puntland, kaas oo lagu muujinayo falal uu ku kacay TV-ga intii uu socday shirkii Brussels.
Puntland war-saxaafadeedka ay soo saartay waxaa lagu yiri ?Maamulka sare iyo shaqaalaha Tv-ga Univrsal waxay ula bareereen madaxdii Puntland ee shirkii Brussels, falal xambaarsan Gardarro, maag iyo daandaansi, Collaadin iyo nacayb iyo sidoo kale ku xad-gudub sharciga saxaafada?.
Wasaarada warfaafinta ee Puntland waxay ku eedaysay Tv-ga Universal iyo maamulkiisa in ay dhinacyo siyaasadeed u xag-liyeen isla markaasna ay meel kaga dheceen anshaxa saxaafada waa sida ay hadal u dhigeen, qoraalka ayaa sidoo kale lagu cadeeyey ilaa amar dambe in Tv-ga iyo howl-wadeenadiisa aysan ka howl geli karin Puntland.
USA oo taageertay howlaha dib-u-heshiista ee ay waddo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya